ပန်ဒိုရာ: ဖြူစင်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို လွတ်လပ်စွာ ပျံသန်းစေတဲ့အခါ
မိုက်တယ်ဗျ ... :P
ဟွန်း.. မနာလိုတော့ မဖြစ်ပါဘူး. အူတိုတာတော့ ဖြစ်တယ်.. ဟား..ဟား.. စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်.. နောက်တာပါ။ အားမကျဘူးလားဆိုတော့လည်း အားကျသား.. ဒါဆို ပန်ပန် မီးပုံးပျံပေါ့နော်.. :D :D
အင်း .. ကောင်းကင်ဘုံမှာ သွားဆုံနေဦးမယ်။
အိုး.. မီးပုံးလေးကလှလိုက်တာ.. ဘူတွေတင်ပေးလိုက်လည်းသိဘူးနော်.. မပန်ကိုတစ်အားဂျစ်လို့နေမှာ.. :P
ပန်ပန်ရေ မီးပုံးပျံကြီးစီးပြီး ဘယ်ရောက်သွားပီလဲဂျ။ ညအိပ်ရင်တော့ သတိထားအိပ်နော် သိကြားမင်းကြီး လာချောင်းမစိုးလို့ အဟတ်ဟတ် :P
har har your fire-ballone is so nice. than thank to you your buddy.
ဟားဟား ပန်ဒိုရာကြီး ဒုံးကျည် မှာ ကပ်နေတယ် ဟီးဟီး
ကိုစိုးထက်> မိုက်ရမယ်လေ ဟဲဟဲ။
မနုစံ > ပန်ပန်မီးပုံးပျံ ဆိုလို့ တွန့်သွားတယ်။ နေပါဦးဗျ။ မြန်မာစကားကလည်း။
ကိုရဲမွံ >တရားသဘောနဲ့ပဲ ကြည့်နေပြန်ပြီ။ ခက်ဦးမယ်။
ဘာညာ > ဟုတ်တယ်နော်။ ဘူလေးတွေလဲ တိဝူး။
မယ်မောင်ရေ > သိကြားမင်းက ဘလော့ဂ် လာဖတ်သွားတယ်တဲ့။
မောင်ဂေါက်ရေ > ညည်းမရှိတာ နာတယ်မှတ်။
မဂျေ > လကမ္ဘာရောက်နေပြီ။